Kazakhstan: Vola, Fakàna an-keriny, Vola, Fahefana, Vola… · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Vola, Fakàna an-keriny, Vola, Fahefana, Vola…
Voadika ny 11 Septambra 2017 3:51 GMT
“Tsy lahatsoratra tao amin'ny horonantsary dokan'i James Bond ilay lohateny. Toy izany no fanaovan'izy ireo raharaham-barotra any Kazakhstan”, hoy i Jana Zhukova nanoratra tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Livejournal an'ny mponina Almaty (Ros). Niresaka momba ireo zava-nitranga nahagaga nanodidina ny “Nurbank” izy, banky fahafito lehibe indrindra ao Kazakhstan mifandray amin”i Rakhat Aliev, vinantolahin'ny Filoha. Tamin'ny 31 Janoary, nisy olona dimy mitam-piadiana niditra an-kery tao amin'ilay tranoben'ny banky saingy voasakan'ireo mpiambina ny banky.
Sary natolotr'i Joshua Foust
Andro maromaro nanaraka izany, tonga tamin'ny hafainganana nahagaga ireo vaovao: nanoratra momba izany Janna (Ros). Voalohany, milaza ireo masoivoho mpampihatra lalàna fa tsy mahalala izay mitranga izy ireo. Avy eo hita fa ireo olona nitana basy dia… ireo manamboninahitry ny hery manokan'ny mpitandro filaminana, izay tonga hanafaka ireo takalon'aina! Ary farany, tamin'ny 4 Febroary, haino aman-jery marobe teo an-toerana sy iraisam-pirenena maro no naharay taratasy avy amin'i Kapasheva Armangul nalefa ho an'i Nazarbayev, Filohan'ny firenena . Armangul dia vadin'i Timraliev Zholdas, Filoha lefitra voalohan'ny filànkevi-pitantanan'ny “Nurbank”. Nmbarant tao anatin'io taratasy io, fa nalaina an-keriny ny vadiny. In-droa.
Nitranga tamin'ny 18 Janoary taorian'ny fivorian'ny Filànkevi-pitantanana ny fakàna an-keriny voalohany ny vadin'i Armangul. Soratany fa ny harivan'io andro io, nampidirina tao anatinà efitrano fandroana manokana, nofatorana rojo vy, nodarohana ary norahonana tamin'ny basy. Manazava i Kapasheva fa tsy nisy olon-kafa afa-tsy Rakhat Aliyev irery no nanao izany.
Inona no nilainy? Araka ny taratasiny, nangataka tamin'i Timraliev izy mba hiantso ny tompon'ny foibe fanaovana raharaham-barotra “Ken Dala”, izay misy ny biraon'ny “Nurbank”, ary handamina ny famindràna azy io ho an'i Aliyev. Tsy maintsy nanao izany ilay takalon'aina. Andro iray taty aoriana, nentina nody tany an-trano izy. Tamin'ny 31 Janoary (ilay andro nisehoan'ilay fanafihana mitàm-basy tao amin'ny banky) nandeha nivory niaraka tamin'ny fitantanana ny banky sy Rakhat Aliyev mpiara-miombona antoka aminy izy. Talohan'ny niaingany hamonjy ny fivoriana dia nilaza tamin'ny vadiny izy mba hitatitra any amin'ny polisy raha misy zavatra mitranga aminy. Mbola tsy tafody an-trano izy hatramin'izao.
Zonakz.net, Navigator na Navi (mpanoritra làlan-tsambo) taloha, dia tsy azo nidirana tamin'ny andro nivoahan'ny vaovao. Ankehitriny, afaka idirana indray izany ary feno fanehoankevitra maro be (ny ankamaroany avy amin'olona tsy mitonona anarana) momba ity vaovao ity. Niezaka nisafidy sy nitondra ireo feo vitsivitsy izay miresaka momba azy ity aho (nialàna matetika ny lohahevitra momba ilay “Fianakaviana”, fanampin'izay tranonkala vitsy fotsiny no mitatitra momba azy ity) ary mety hahita bebe kokoa ny feoko mihoatra noho ny mahazatra eto ianareo.
Ny bilaogin'ny KUB, izay vao haingana no nahazo sazy mihantona roa taona ny mpanoratra azy, dia manohy ny fanavaozana avy amin'ireo mpanoratra hafa. Araka izay nosoratan’ (Ros) ny iray tamin'izy ireo, tiffozi, niantso an-telefaona ny vadiny i Timraliev ary nilaza fa miafina izy noho ny fiampangana nataon'ireo polisy ara-bola. Nanjavona ihany koa ny mpiara-miasa iray amin'i Timraliev, Abel Gilimov, ary miatrika fiampangana koa izy. Inoana i Gilimov fa manana rohim-pihavanana amin'ny ben'ny tanànan'i Almaty izay lazaina fa mifanohitra amin'ny fokon'i Aliyev ny fokon'izy ireo.
Taorian'ireny fitantaràna mifanohitra ireny, nofaritan'ny solombavambahoaka Dariga Nazarbayeva, zanakavavin'ny filoha, ho fanafintohinana bevava henjana be, tsy misy idiran'ny resaka politika ilay raharaha. “Araka ny fahalalako”, hoy izy, “migadra ao an-tranony i Timraliev. Tsy fantatro hoe ahoana no tsy hahitan'ny vadiny izany …”. Naneho hevitra ihany koa i Rakhat Aliyev: “… ny fampahalalam-baovao mahakasika ilay mpiasa taloha nanjavona tao amin'ny banky dia miharihary ho toy ny fihantsiana fanendrikendrehana voaomana tsara. Araka ny fahalalako, noahiahiana tamin'ny fanafintohinana bevava ity olona ity ary amin'izao fotoana izao migadra ao an-tranony manome porofo ho an'ireo mpanara-maso. Efa nilaza ny fitantanana ny “Nurbank” fa hiaro ny lazany amin'ny fanalana baràka sy fanendrikendrehana maloto atao azy. Amin'ny maha-mpiara-miombona antoka amin'ny banky ahy, dia miombona amin'io fanambarana io aho”.
Nisy fanehoankevitra maro momba ny lahatsoratr'i Zhukova:
Hoy i Kubekov mpampiasa LJ: Izany hoe…. Raha nametraka ny tànany tao i dokotera Aliyev (dokotera mpandidy taloha i Aliyev)… Mitovy aminà sarimihetsika mora vidy ity!
Mpampiasa LJ, teihe: Ataovy ny fanambinareo, tompokolahy, momba ny fihetsiky ny Filoha.
Tena mahaliana tokoa ny ho fihetsiky ny filoha momba azy ity, raha misy foko roa mandray anjara, ny iray amin'izy ireo dia tarihan'ny vadin'ny zanany vavy. Ny olona sasany milaza fa mety ho lasa masoivoho indray izy, toy ny taorian'ny taona 2001, rehefa nalefa tany Aotrisy nandritra ny taona maromaro taorian'ireo fisehoan-javatra hafahafa, araka ny filazan'ny sasany, nidiran'ny faniriany hahazo fahefana.
Nandritra ireo hetsika ireo, nanao fitsidihana ofisialy tany Alemaina ny Filoha, izay tsy nahamenatra ny filoha Angela Merkel ny niresaka momba ny raharahan'ny zon'olombelona any Kazakhstan, hoy ny nosoratan'i Ben ao amin'ny neweurasia. Nanolotra manokana ny fanampiany sy ny fiarahamiasany izy tamin'ny fanorenana rafitra ara-dalàna. ” “Mahaliana tokoa ny manamarika fa ilay firenena Sovietika teo aloha, 17 taona nidirana ho amin'ny fahaleovantena, dia mbola mandray fanamavoana noho ny toerany amin'ny maha-firenena zazabodo azy mitovitovy amin'ny hoe “oh, nanorina rafitra ara-dalàna avy amin'ny tsy misy ianareo, mazava ho azy, mila fotoana izany”. Raha ny marina, ny fametrahana rafitra ara-dalàna iray salama tsara dia nandaniana am-polo taona maro tany amin'ny Tandrefana, saingy miraritra tsikelikely ny fotoana mampitombina ireo hevitra toy ny an'i Merkel”, hoy i Ben.
Nony tonga ny anjarany, tsy menatra mihitsy i Nazarbayev rehefa hoe hisotro labiera ary nisafidy ireo telo avy amin'ny lisitr'ireo fombafomba: vehivavy iray, sabatra iray iray ary labiera. “Tahaka an'i Putin taona maromaro lasa izay, nisotro labiera be dia be i Nazarbaev ary nandohalika handray ny fankasitrahana azy. Ankehitriny dia mpitaingin-tsoavaly manokan'i Spandau izy.”
Tany Okraina, nijaridina teo amin'ilay tranobe nihaonan'i Nazarbayev tamin'i Yushchenko ireo mpikatroka ao amin'ny hetsika Novaya Pora. Narangarangan'izy ireo ny teny filamatra hoe: “Nazarbayev, Aza Manao ny Hadisoan'i Kuchma! “, manazava fa Kazakhstan dia miaina ireo rehetra niainan'i Okraina nandritra ny fitondran'i Kuchma – fanafoanana ny fahalalahana miteny, fandavana ny fisoratana anaran'ireo antoko mpanohitra, fifidianana mitanila.
Na izany aza manana zavatra manandanja kokoa hohavahana ao an-trano i Nazarbayev. Ho hitan-tsika eo.